Imindeni ebhekene nenhlekelele
Ngemva kwenhlekelele, indawo yokuhlala enethezekile ibalulekile. Izinhlelo zethu zivumela abantu ukuthi baxhumane nomphakathi wabo futhi bathole indawo yokukhosela ngesikhathi esinzima. Sethula u-Jorge no-Laura
Sinikeza imiphakathi indlela yokubumbana lapho kugadla inhlekelele. Ngezinhlelo ze-Airbnb.org, abantu banganikela ngamakhaya abo mahhala komakhelwane abadinga ukuphuma ezindlini zabo. Nangu u-Bob no-Juan
Ababaleki nalabo abafuna isivikelo babhekana nezinselele eziningi uma bethuthela kwelinye izwe. Ukuba nendawo yesikhashana yokuhlala, yamahhala, kubasiza babe nokuthula kwengqondo njengoba beqalisa ukuphila kwabo okusha. Nangu u-Els no-Fode
Abahlengikazi ababhekene ngeziqu zamehlo ne-COVID-19
Ngesikhathi sobhubhane, izisebenzi zezempilo zazidinga ukuhlala eduze nalapho zisebenza khona noma ziqhelelane ngokuphephile nemindeni yazo. Ababungazi be-Airbnb emhlabeni wonke babanika indawo yokuhlala. Nangu-Chiara, u-Brandi, no-Ji
Kungathatha iminyaka ukuba umphakathi ululame ngokuphelele enhlekeleleni enkulu. I-Airbnb.org isiza ekukhokheleni izindawo zokuhlala zezisebenzi ezenza umsebenzi obucayi wokwakha kabusha imiphakathi. Nali iqembu le-Mercy Corps